आलिया र रणवीरको विवाहमा २८ पाहुना मात्रै बोलाइयो, कहिले हुने मेहन्दी संगीत समारोह ? « Etajakhabar
आलिया र रणवीरको विवाहमा २८ पाहुना मात्रै बोलाइयो, कहिले हुने मेहन्दी संगीत समारोह ?
एजेन्सी । रणवीर र आलियाको चर्चा अहिले जताततै छ । आलियालाई रणवीरकी दुलही बनेको हेर्न सबै उत्सुक छन् । दुवैको विवाह जोडी र फ्यानका लागि निकै विशेष र यादगार हुने भएको छ ।रणबीर कपुर र आलिया भट्टको विवाह वास्तुस्थित ब्रान्डाको घरमा हुनेछ । दम्पतीले भवनमा एउटा बैंक्वेट हल पनि बुक गरिसकेका छन्, जुन हाल विवाहको लागि सजाइएको छ।
कहाँ हुनेछ जोडीको मेहेन्दी र संगीत समारोह ?
रणवीर र आलियाको विवाहसँगै उनीहरुको विवाहपूर्व समारोह पनि विशेष हुने भएको छ । आलिया र रणवीरको विवाह अघि आरके स्टुडियोमा उनीहरुको मेहन्दी र संगीत समारोह हुने भएको छ । स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका अनुसार १३ अप्रिलमा मेहन्दी समारोह हुनेछ भने १४ अप्रिलमा संगीत र हल्दीको अनुष्ठान गरिने छ । वैशाख १४ गते दिन हल्दी लाग्ने र साँझ सांगीतिक कार्यक्रम हुनेछ ।
विवाह समारोहको लागि सजाइएको आरके स्टुडियो
रणवीर र आलियाको विवाहको लागि आरके स्टुडियो पहिले नै सजाइएको छ। स्टुडियोमा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था पनि गरिएको छ । विना अनुमति कसैलाई पनि स्टुडियो भित्र जान दिइँदैन ।
आलिया(रणवीरको विवाहमा धेरै पाहुना आउनेछन्
आलिया भट्टका भाइ राहुल भट्टले पनि कुराकानीमा विवाहसँग जोडिएको विशेष जानकारी दिएका छन् । उनले विवाहमा २८ जना मात्रै पाहुना आउने र सबै परिवारका सदस्य हुने बताए । उनीहरु सबै बसमा चेम्बुर जानेछन् । यस अवधिमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ ।
राहुल भट्ट महेश भट्ट र किरण भट्टका छोरा हुन्। पूजा भट्ट राहुलकी जेठी बहिनी हुन् । आलिया महेश भट्ट र उनकी दोस्रो पत्नी सोनी राजदानकी छोरी हुन्। सबैजना एक अर्काको धेरै नजिक छन्। राहुल पनि आफ्नी बहिनी आलियाको विवाहलाई लिएर निकै उत्साहित छन् ।
आलिया र रणबीरलाई बधाई दिँदै राखीले आफूलाई काकी भनिन् , ट्रोलरहरुले भने–आलियाले तिमिलाई धेरै अघि अनफलो गरिसकेकी छिन्, केका काकी
आज सम्म कसै संग डेट गएकी छैन : जान्हवी कपुर
फिल्म फ्लप भएपछि रानी मुखर्जीका पति आदित्य चोपडाले अक्षय कुमारमाथि लगाए गम्भीर आरोप
बलिउडकै सर्वाधिक महंगो लागतको फिल्म ‘आदिपुरुष’ मा रामको भुमिका देखिदै बाहुबलीका प्रभास,सैफ रावणको भूमिकामा